Nhau - Chibage chimbishi chiri kusimuka, vagadziri vanowedzera mitengo imwe mushure meimwe, uye musika weLysine uye threonine inosvetuka
Mushure meMid-Autumn Mutambo uye Zuva reNyika, mutengo wechibage wakakwira, uye pari zvino mutengo wekutenga unoona wadarika 2,600 yuan / ton, makore mana akakwirira. Ichinetseka nekukwira kwemitengo, lysine uye threonine makambani achangobva kukwidza makotesheni avo imwe mushure meimwe. Musika weLysine uye threonine wakatsvairwa kare, uye wakasvetukira kumusoro. Parizvino, mutengo wemusika we98% lysine iri 7.7-8 yuan / kg, uye mutengo we70% lysine uri 4.5-4.8 yuan / kg. Iwo threonine musika Mutengo uri 8.8-9.2 yuan / kg.
Musika wegorosi mbishi "unokura zvine simba"
Chibage chegore rino rekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva chakatambura madutu matatu akateedzana. Nzvimbo huru yekugara yakakonzera kuoma mukukohwa chibage. Iyo inononoka kufambira mberi kwechibage nyowani nyowani uye yakasimba musika zvinotarisirwa. Makambani ekudzika akakwidza mitengo yekutora zviyo. Varimi vekumusoro kwerwizi vaizeza kutengesa. Musika wechibage wakasimuka muna Gumiguru. , Kubva muna Gumiguru 19, wepakati wepakati mutengo wechibage waive 2387 yuan / ton, kukwira 5.74% mwedzi-pamwedzi uye 31.36% gore-ne-gore. Mutengo wechibage wechibage wakakwira kubva pa2,220 yuan patani pakutanga kwegore rino kusvika pa2,900 yuan patani svondo rino, kuwedzera kudarika makumi matatu muzana. Panguva imwecheteyo, kukwira nekukurumidza kwakawedzera njodzi yemusika yekudzokerwa, asi mutengo unoramba wakakwira. Munguva pfupi yapfuura, mutengo wezvinhu zvakagadzirwa wakakwira uye zvinonetsa kutenga, uye mutengo wekumanikidza wezasi kwekudzika ekugadzirisa mabhizinesi akawedzera zvakanyanya. Ivo vatevera nekukurumidza uye vasimudza mazwi avo.
Dzimba dzekugadzira nguruve dzinoenderera dzichipora
Kudiwa kwemumba kuri kuwedzera. Munguva pfupi yapfuura, mutauriri weNational Bureau yeStatistics akati pakupera kwekota yechitatu, huwandu hwenguruve mhenyu hwaive 37.39 mamirioni, gore-gore-gore kuwedzera kwe20,7%; pakati pavo, huwandu hwekudyara kwekudyara hwaive 38.22 mamirioni, kuwedzera kwe28.0%. Iyo data yakaburitswa neFeed Industry Association inogona zvakare kuona kuenderera kuri kupora kweanogadzira nguruve kugona. MunaGunyana, chikafu chenguruve chakaburitswa chaive matani miriyoni 8.61, kuwedzera kwe14.8% pamwedzi-pamwedzi uye gore-gore-gore kuwedzera kwe53.7%. Mumwedzi mipfumbamwe yapfuura, kuburitswa kwemombe kwemwedzi pamwedzi kwakawedzera mwedzi-nemwedzi kunze kwaNdira naMay; uye yakawedzera gore-ne-gore kwemwedzi mina yakateedzana kubvira muna Chikumi. Kudiwa kumatunhu ekunze kwanga kusisina kusimba, denda idzva rekorona muEurope neUnited States rakadzokororazve kaviri, uye hupfumi hwadzikira zvakare mukota yechina, ichiita dip dip.
Kupfupisa: kudiwa kwepamba kuri kuwedzera, kudiwa kwekunze hakuna kusimba, mutengo wechibage mukutanga nhanho wakakwira, huwandu hwekunze hweamino acid huri kudzikira, mamwe makambani e lysine uye threonine ari munzvimbo yekurasikirwa. Iwo amino acid uye threonine makambani ekugadzira anonetseka mukukohwa zviyo, chiyero chekushanda chakadzikira, mutengo wekumanikidza wakanyanya kutaridzika, mutengo wemitengo wakasimba, musika unotsigirwa nekushanda kwakasimba, yekutevera inoda kutarisisa chibage musika uye shanduko mukushanda kwehuwandu hwevagadziri.
L-Threonine Pharm Giredhi, L-Threonine Chikafu cheGiredhi, Kudya Kwemhuka, 73-32-5 L-Isoleucine, Pharm Giredhi L-Leucine, L-Valine 72-18-4,